राष्ट्रिय पुँजी र विदेशी लगानीको सन्दर्भ - Jhilko
राष्ट्रिय पुँजी र विदेशी लगानीको सन्दर्भ
यतिखेर सरकारले ठूलै तामझामका साथ विदेशी लगानी ल्याउने सम्मेलन सुरु गरेको छ । ३० खर्बको खोजी गर्दै सुरु भएको सम्मेलनमा सरकारले ५० वटा र निजी क्षेत्रले २७ वटासहित कुल ७७ वटा परियोजनामा लगानी ल्याउने अनुमान गरिएको छ ।
कूल ७७ आयोजनामार्फत ३० खर्ब भित्रिने र यसमध्ये १२ वटा आयोजन सम्झौतामा पुग्ने सम्मेलनको प्रारम्भिक लक्ष्य हो । विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक, एसियाली पूर्वाधार लगानी बैंक, माइक्रोसफ्ट, अमेजन, पावर चाइना, पावर रेल्वे, डाबर कर्पोरेसन, यूनिलिभर लिमिटेड लगायतका कर्पोरेट लगानीकर्ताको सम्मेलनमा सहभागिता छ ।
चालीस देशका करिव सातसय प्रतिनिधि सहभागी रहने सम्मेलनले निकाल्ने परिणामबारे सम्मेलनको समाप्तिपछि नै दिन सकिन्छ ।
नेपालमा केही वर्षदेखि विदेशी लगानीको ‘धुन’ सुरु भएको छ । तर वैदेशिक लगानी ल्याउने प्राथमिक क्षेत्रहरु अनुसन्धानपूर्वक पहिचान भने गर्ने गरिएको छैन । विदेशी लगानी आए आर्थिक मामिला स्वतः छुमन्तर हुन्छ भन्ने धारणाले काम गरेको छ । राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्क अनुसार गत वर्ष सबैभन्दा बढी १७ अर्व ५१ करोड र त्यसअघिका वर्षहरुमा क्रमसः साढे १३ अर्व ५० करोड र ५ अर्ब ९२ करोड रुपैया भित्रिएको छ । तर भित्रिएका रकमहरु उत्पादन र सेवाको क्षेत्रमा कति लगानी भए र त्यसको परिणाम सार्वजनिक जानकारीमा छैन् । यो लगानीले राष्ट्रिय पुँजीमा पारेको प्रभाव मूल्यांकन भएको छैन् ।
राष्ट्रिय पुँजीको सन्दर्भ
नेपालको संविधानले समाजवाद उन्मुख राज्य व्यवस्थाको परिकल्पना गरेको छ । अझ जोड दिएर भन्ने हो भने संविधानको प्रस्तावनामा नै समाजवादको परिकल्पना गरिएको छ । तर, आजको पुँजी बजार समाजवादको सहयोगी अर्थ ढाँचामा छैन । मुलुकको स्रोत, सामाग्री र सीपमा आधारित भएको पुँजीमार्फत उद्योग, व्यापार एवम् वाणिज्यको अभ्यास गर्दै राष्ट्रिय पुँजीको विकास गर्ने काम नेपालमा भइसकेको छैन् ।
परम्परागत निर्वाहमुखी अर्थतन्त्रलाइ जसोतसो धानिरहेको नेपालको राष्ट्रिय पुँजीमाथि विकास र समृद्धिको नाममा अर्थात द्रुत आर्थिक विकास गर्ने नाममा भित्रिने विदेशी पुँजीले राष्ट्रिय पुँजीलाई कुन कुनामा धकेल्छ ? अहिले नै प्रश्नहरु बग्रेल्ती उठेका छन् । भर्खर भर्खर बामे सर्दै गरेको नेपालको सेवा उद्योग विकसित हुन अझै केही समय लाग्नेछ । उत्पादनको क्षेत्रमा त नेपालको राष्ट्रिय पुँजीको विकास भनेको वामे सर्दै गरेको अवस्था हो ।
विदेशी पुँजीको हस्तक्षेप विरुद्ध राष्ट्रको पुँजीको विकास गर्न सक्रिय रहनु पर्ने यो बेला हो । विदेशी एकाधिकार पुँजीवादको शोषणबाट देशलाई बचाउन राष्ट्रिय पुँजीको विकास गर्ने गरिन्छ । यदि मुलुकको स्वाधिन राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकास गर्न सकिएन भने त्यसले राष्ट्रिय स्वाधिनतामाथि नै धक्का लगाउँछ । स्वाधीन अर्थतन्त्रको अभावमा राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा गर्न नसकिएको कुरा विश्वमा अनेकौं उदाहरणहरु छन् । के अहिले भइरहेको सम्मेलनले यसको उत्तर दिन सक्छ ?
राष्ट्रको स्वाधीन आर्थिक विकास (यहाँ केवल आर्थिक विकासको मात्र कुरा गरिएको हैन, स्वाधीन शब्द प्रयोग गरिएको छ) मा सम्मेलन कोशे ढुंगा सावित हुन सक्छ ? प्रश्नहरु अनुत्तरित हुनु हुन्न । राज्य नियन्त्रित विदेशी लगानीका सन्दर्भहरु जापान, ताइवान, थाइलेण्ड आदि मुलुकमा केही सार्थक भयो । पछिल्लो पटक ८० को दशकमा चीनले राज्य नियन्त्रित समाजवादी व्यवस्था अनुकूल बनाएर विदेशी लगानीलाई देशहित अनुकूल बनाउने प्रयास गरिएको अभ्यास हो । भलै ती देशहरुमा विदेशी लगानीसँगै भित्रिएको राजनैतिक, सांस्कृतिक उप–उत्पादनको प्रसंगको परिणाम आउन बाँकी नै छ । तर नेपालले भने ऐनहरु नै संशोधन गरेर विदेशी लगानीलाई रातो कार्पेट ओछ्याएर स्वागत गरेको छ ।
अमेरिकी दबाब हुँदा पनि हुवावेको बिक्री एक खर्ब डलर नाघ्यो
जिल्ला प्रशासन कार्यालय चितवनमा आज बसेको सुरक्षा समितिको बैठकले मङ्सिर २७ गतेदेखि...
इनानीले राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले आफ्नो उद्योगको सम्पूर्ण सम्पत्ति २०५८ सालदेखि कब्जा...